American Airlines ichienzaniswa neJet Blue: Anoshanda Platinum Nhengo ine mhinduro inoshamisa | Nhau Dzemhepo
musha » mbiru » Nhau Dzemhepo » American Airlines ichienzaniswa neJet Blue: Anoshanda Platinum Nhengo ine mhinduro inoshamisa
Nhau Dzemhepo • Aviation Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • LGBTQ • mwe • Vanhu vachigadzira nhau • Tourism Nhau • Tourism Kutaura • Zvokufambisa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Nhau dzeKufamba • Inotyisa Nhau • USA News
American Airlines ichienzaniswa neJet Blue: Anoshanda Platinum Nhengo ine mhinduro inoshamisa
Kuva American Airlines Executive Platinum Nhengo inogona kunge isina zvayinoreva kana uchibhururuka nendege paAA naRoxie. Panoita kunge paine musiyano mukuru wekuti muridzi wechipfuwo asarudze JetBlue pane American Airlines.
KUITA CHINHU CHOKWEDZERA kwakasiyana zvakanyanya nekuita ZVAKANAKA.
Chii chinonzi Executive Platinum Nhengo yeAmerican Airlines kwemakore akati wandei zvinoreva kune iyo Ndege?
Ichi chidiki chekupenga uye refu chirevo saka ramba uchiverenga paunoda iwe. Asi kuverenga uye kugovana izvi zvinogona kubatsira vamwe varidzi vezvipfuyo / vadikani vanoronga kubhururutsa zvipfuwo zvavo rimwe zuva. Ini handidi kuti chiitiko changu chinotyisa neAmerican Airlines chiitike nevamwe vanhu.
American Airlines yakashandura Frenchie yangu, Roxie kure nekutiza kwedu kubva kuPBI - DFW - LAX nekuti sezviri pachena, haikwanise kumira mumutakuri apo yakavharwa nekutendeuka.
Iye anokwanisa kutendeuka asi iye anopfuura pamusoro peanotakura. Sekuziva kwangu, imbwa diki chete uye imbwa diki dzinogona kuita izvo zvichipiwa saizi yehukuru hunotenderwa hwevatakuri.
Ndakafambisa Roxie neAmerican Airlines kanoverengeka uye izvi hazvina kumbove nyaya. Nekuda kweizvozvo ini ndakatozomisa kukwira ndege yangu uye ndisingakwanise kutora nendege yangu kuenda kuLA. Izvi zvakanyatsoisa ini naRoxie mune isina chokwadi mamiriro panhandare. Ini chaizvo handinzwisise zvine musoro zvekuramba kwedu.
American Airlines yanga ichimisa mazana enendege zuva rega rega nekuda kwekutadza kwavo kugadzirisa kukwidza uye kugara vachiverenga ndege.
Izvi hazviite kunge zviri kuitika nedzimwe ndege saka chiratidzo chekusagona kwavo. Izvi zvisati zvaitika, ivo vaikumbira vanozvipira kuti vape zvigaro zvemari.
Vakabva vakanzura ndege yangu yekutanga maawa maviri ndege isati yaenda. Ndokundidzorerazve pane imwe ndege inomhara muBurbank pachinzvimbo cheOrange Nyika iri padyo nepamba. Ini ndinotenda izvi zvakaitika nekuti vari kutsvaga chero chikonzero chekusunungura zvigaro kuti vagokwanisa kuzadza iwo akawandisa mabhuku uye zvese kukanzurwa kwendege.